के भयो यस्तो ! अस्पतालको सानो गल्तीले मृ,त शिशुको जन्म, किन चिकित्सक यसरी चुक्छन् बेला बेलामा ? – Wow Sansar
गत १० डिसेम्बरमा सेन्ट जोह्न अफ गड हस्पिटलमा यो घ,टना घटेको थियो । तर, हालसम्म पनि हस्सन दम्पतीले यस घ,टनाले आफूहरूको जीवनभरि आघात पुगेको बताउँदै आएका छन् । अस्पताल र चिकित्सकहरूले आफूहरूको सानो गल्तीले गर्दा यसमा ठूलो मानवीय त्रुटि भएको तथ्य स्विकारिसकेका छन् ।अस्ट्रेलियाको स्वास्थ्य उपचार नियमन निकायले यस घटनामा जिम्मेवार ठहर गरी एकजना मिड वाइफको अनुमतिपत्र निलम्बन गरेको छ । यसैगरी, अर्का एकजना कर्मचारीले आफ्नो गल्ती महसुस गरी स्वेच्छाले राजीनामा दिएका छन् ।